Anyị niile kpọrọ asị na asị adịgboroja na oku ... Rue Mgbe Anyị Na-adịghị | Martech Zone
Na May 15th, enwetara m email na-achọghị (aka SPAM) site na ụlọ ọrụ na Atlanta na-agwa m ihe vidiyo vidiyo bụ. Amaara m ihe ọ bụ, anyị nwere edere banyere vidiyo na-akọwa ọtụtụ ma bipụtara ọtụtụ ole na ole nke anyị. Azaghị m email ahụ. Otu izu ka e mesịrị, enwetara m email ọzọ nwere ederede yiri ya. Otu izu ka emechara, ọzọ. Anaghị m aza ma. Ozi email anọ m na-azaghị ma ọ bụ ọbụna pịa njikọ dị na ya.
Anyị malitere ọrụ na a ọhụrụ ahịa na ike ha branding chọrọ maka ụfọdụ nnochianya anyị na-redesigning. Otu n'ime ọrụ ọdịnihu anyị maara na anyị ga-arụ bụ vidiyo na-akọwa maka ha. Yabụ, ka m na-aza ụfọdụ nzaghachi na nkwekọrịta ọhụrụ anyị mepụtara, ana m anata ozi email ọzọ site na ụlọ ọrụ vidiyo na-akọwa.
Enweghị njikọ wepu aha na email ahụ, ma ọ bụ nke ọ bụla kwadoro site na logos… ma m nnọọ n'aka na ọ na-tinye n'ọrụ a ahịa akpaaka ngwá ọrụ. Onye na-ahụ maka ire ahịa ahụ etinyere ụfọdụ njikọ nke ọrụ ọhụrụ ha na email wee kwuo na ha ga-achọ ị nweta ego iji soro m rụọ ọrụ mbụ. M hover mkpịsị aka m na ihe atụ jikọtara di na nwunye ole na ole na-eche ma ọ ga-adị mma ma ọ bụ na not wee pịa.
Ebe m pịrị bụ vidiyo dị mma nke na-akọwa nkeji nkeji. Ọ na-n'ụzọ zuru ezu animated, nwere oké soundtrack, na ọbụna utịp mbuaha ke. Ọsọ nke ọ bụghị bugara ọlị na ọ bụ ahụkebe àgwà. Nke a nwere ike ịbụ nkwekọrịta m na-agaghị agabiga ka m wee zaghachi ozi ọhụụ m wee pịa zipu.
N’ime otu nkeji, ekwentị m kụrụ na ọ bụ nwoke ahụ zitere m ozi a na-achọghị kwa izu. Ọ kpọkuru ka ọ chọpụta nkọwa ndị ọzọ ma nwee obi ụtọ ịhụ ma ha nwere ike inye aka. Ọ bụghị pushy, na-anwa imechi m, ma nọrọ oge ụfọdụ na-amụ banyere azụmahịa m na ike anyị. Anyị kwubiri mkparịta ụka ahụ na ya na-ekwe nkwa ịgbaso ọnụego n'ụtụtụ.
Anyị Kpọrọ Ya asị… Mana ọ na-arụ ọrụ!
Ekwenyesiri m ike na a ga-apịa m ihe n'ịntanetị n'ihi ịbụ onye na-ere ahịa email nke na-ekwupụta n'ihu ọha:
Ịzaghachi na SPAM
N'ezie na-eme ihe atụ na na ịpị njikọ na ozi email SPAM.
Ok, ị nwetara m. Ma ị maara ihe? Lọ ọrụ a nwere ike ịchọta onye ahịa ọhụụ ga-enye ha ọrụ na-aga n'ihu na mpaghara a. Ma enwere m ike ịbịakwute onye mmekọ dị egwu nke nwere ike ibuli animation maka anyị na ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Ọ bụrụ na m na-eme na-eme nanị ole na ole na-akọwa vidiyo maka ha, ụgwọ ọrụ ahụ karịrị nnọọ ihe egwu maka ụlọ ọrụ abụọ ahụ.
Anyị niile na-eti mkpu ma na-eti mkpu banyere SPAM na oku oyi… mana anyị kwesịrị ịkwụ n'eziokwu maka ịdị irè nke ha. Ahịa bụ maka ngwaahịa, ntinye, na ọnụahịa. N'okwu a, ngwaahịa a bụ ihe m chọrọ, nhazi oge kwesịrị ekwesị, ọnụahịa ahụ ziri ezi.
Nke a apụtaghị na m ga - agba ndị ahịa m ume ka ha bido ịba amị na ndị mmadụ… mana m ghọtara ihe kpatara azụmaahịa ji eme ya.
Ọ na-arụ ọrụ.
Tags: emailokuozi ịntanetịspamn’achọghịoku a na-achọghị ịrịọozi ịre ahịa ị na-achọghị
Ighota ihe ndi ahia gi choro na nyocha
Jun 16, 2017 na 11:11 AM
Ekwenyere m na gị. Isi ihe dị ebe a bụ na nyocha ahụ dị mkpa. Anyị kwesịrị ịdị uchu na-eme nnyocha ahụ ma ghọta ndị nwere ike ịzụ anyị. Echere m na oge ụfọdụ anyị na-enwetụ obi ilu n'ihi na anyị nwere ike nwee ahụmịhe akara SPAM ma nwee obere ihe na-enye obi ụtọ ịka ndị ọzọ akara dị ka SPAM. Kinddị ihe a nwere ike imebi ụlọ ọrụ; ogologo oge. Enwetara m email n'abalị ụnyaahụ site n'aka onye na-anwa ire m na ọrụ ọdịnaya, na mbido m ga-akara ya dị ka spam, mana enweghị m ike iwepụta ya. O nweghi njikọ wepu aha, ma. Nanị m rụtụrụ aka wee sị, "mba, daalụ." Echere m na anyị kwesịrị ịmata ọdịiche dị n'etiti spam phishy. Ndị na-ekwu, "were mgbakwunye ọhụrụ a," ma ọ bụ "mee $ 1,000 kwa ụbọchị, site n'ụlọ"; Ndị a bụ spam n'ụzọ doro anya, enweghị ebum n'uche. Echere m na ọ bụrụ na onye na-ere ahịa emeela nyocha zuru ezu ịmara na ị na-ere ahịa ma napụta gị ozi email na-enye ọrụ ahịa, ọ dị mma. Naanị kwuo okwu ma kwuo, "mba, ekele" na nke ahụ ga-eme. Email anaghị apụ apụ, ma ọ bụ ọkpụkpọ oyi.